Sidee looga saaraa wasakhda yaanyada | Bezzia
Tony Torres | 10/06/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 10/06/2021 11:01 | Guriga
Ka qaadista wasakhda yaanyada waxay noqon kartaa mid aad u adag, gaar ahaan haddii wasakhdaasi ay ku taallo dhar jilicsan ama haddii loo oggol yahay inay aad u qallajiso. Wax ka qabashada si deg deg ah ayaa muhiim u ah baabi'inta wasakhda yaanyada gebi ahaanba. Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii aadan ilaalinaynin wasakhda xilligan oo dhowr saacadood ay dhaaftay, iyadoo qaar ka mid ah khiyaanooyinka ay suurtagal tahay in laga wada saaro iyaga gebi ahaanba.
Waxa kale oo muhiim ah in lagu xisaabtamo nooca yaanyada ee soo saaray wasakhda, maadaama yaanyada dabiiciga ahi aanay la mid ahayn suugada yaanyada. Suugada yaanyada ku saleysan sida ketchup, marka lagu daro yaanyo urursiga, waxaa ku jira saliid, dhir udgoon, iyo liqueurs. Marka talaabooyinka la qaadayo xoogaa wey ku kala duwanaan doonaan xaalad kasta. Ka dib waxaad ka heli doontaa talooyinka qaar si looga saaro wasakhda yaanyada.
1 Ka qaad wasakhda yaanyada ee dabiiciga ah
2 Khiyaamo si looga saaro wasakhda yaanyada la shiilay
3 Talooyin kale
Ka qaad wasakhda yaanyada ee dabiiciga ah
Yaanyada dabiiciga ah way fududahay in laga saaro, maadaama aysan ku jirin waxyaabo kale ama waxyaabo lagu daro oo dhibka wasakhaynaya. Si kastaba ha noqotee, nidaamku wuu ka duwan yahay haddii aad isku dayeyso inaad ka saarto wasakhda yaanyo cusub, marka loo eego haddii ay tahay wasakh durba qalalan. Xaaladda koowaad waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda:
Marka hore qaadada inteeda kale qaaddoHaddii dharku jilicsan yahay, ha ku qasbin xoog si aad uga fogaato waxyeelada fiilooyinka.
Dharka dhig hoostiisa qulqulka biyaha qabow, adoo daaya inay socotaan dharka gudihiisa ilaa dibedda.
Codso qadar yar oo ah saabuunta dawada weel dhaqe oo ku xoq farahaaga.
Ku biyo raaci biyo qabow ilaa xumbada saabuunta si buuxda looga saarayo.
Ku soco dharka dhaq caadiyan.
Haddii wasakhda yaanyada dabiiciga ahi qalalan tahay, waxaad u baahan tahay inaad raacdo talaabooyinkan si aad uga takhalusto gebi ahaanba.
Shaambada a maro cudbi ah oo khal khal leh nadiifinta.
Si taxaddar leh, mari mariinka yaanyada illaa inta laga saarayo gebi ahaanba.
Tag adigoo isticmaalaya meelo kala duwan oo dharka ahTani waxay ka hortageysaa yaanyada inuu u wareejiyo qaybaha kale ee dharka.
Ku biyo raaci biyo qabow kuna dhaq mashiinka dharka sida caadiga ah.
Khiyaamo si looga saaro wasakhda yaanyada la shiilay
Suugooyinka yaanyada ee la baakadeeyay waxay ka kooban yihiin in ka badan hal maado, taas oo ka dhigeysa baabi'inta kuwa aan la rabin xoogaa dhib badan. wasakhda dharka. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad wax u qabato, ayay u badan tahay inaad ka wada saarto wasakhda yaanyada gebi ahaanba. Marka haddii aad ku aragtid dhar yaanyo shiilan dharkaaga ha ku dhaafin dambiisha dharka lagu dhaqo adigoo sugaya dhaqitaan. Raac talaabooyinkan waxaadna ka saari kartaa dharkaaga wasakhda yaanyada.
Kujira qaataha qaso soodhaha biyo yar. Waa inaad heshaa xabbad miro ah si aad u nadiifiso nabarrada.
Ku faafi dhalada soodhaha leh wasakhaynta oo ka tag illaa 15 daqiiqo.
Waqtigu wuu dhaafay, iskudarka ka saar oo biyo raaci biyo qabow.
Ku celi talaabooyinkan ilaa wasakhda yaanyada gebi ahaanba baaba'ayso
Ugu dambeyntii dharka dhaq sida caadiga ah mashiinka dharka lagu dhaqo.
Wax ka qabashada si deg deg ah waa muhiim, laakiin waxaad halis ugu jirtaa inaad gaarto go'aano liita oo aad xaalada sii murginayso. Mid ka mid ah dareenka ugu horreeya marka aan helno wasakhda yaanyada ayaa ah in la isticmaalo maro xafaayad ah si looga soo saaro hadhaaga, taas oo shaki la’aan ay qalad tahay. Maqaarka ayaa sii fidiya wasakhda iyo waxay ka caawisaa inay si wanaagsan ugu fiiqmaan fiilooyinka dharka.
Xaaladahaas ayaa la doorbidaa in loo isticmaalo qaaddo ama mindi si looga soo saaro haraadiga cuntada, iyada oo aan halista wasakhda faafin. Sidoo kale waa inaadan isticmaalin qalajiyaha markaad dhaqeyso dharkaaga wasakhaysan ee yaanyada, Maaddaama kuleylka uu ka caawinayo wasakhda inay si fiican u hagaajiso fiilooyinka dharka. Markii aad dharka dhaqaysid, u oggolow inuu ku qallalo hooska si looga ilaaliyo kulaylka inuu dhigo nabarrada oo ay adkeyso in laga soo saaro.
Ugu dambeyntiina, haddii dharkaaga aad ku aragtid sunta yaanyo oo midkoodna khiyaanooyinkaan kuu shaqeyneynin, ha quusan. Kahor intaadan tijaabin xulashooyinka kale, xitaa qaar ka mid ah wax soo saarka wasakhda suuqa, sug si loo baabi'iyo xalka hore. Taasi waa, dharka dhaq oo u daa inuu gebi ahaanba qalajiyo. Markaa waxaad tijaabin kartaa xeelad kasta oo kale iyadoon qatar u aheyn inaad dharkaaga dhaawacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Sida looga saaro wasakhda yaanyada